Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nepal » Yaab yaabkii Maalinta Dalxiiska Adduunka ee Nepal ayaa dib u furmaya?
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Nepal • News • Dadka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Namaste Maalinta Dalxiiska Adduunka 2021! Dalka Nepal tani waxay ka dhigan tahay in huteeladu mar dhow soo dhaweyn doonaan martida ajnabiga ah. Nepal waxay awood u yeelan doontaa inay u soo bandhigto dalxiisayaasheeda bannaankeeda ballaadhan, harooyinka, buuraha iyo cunnada si ay ugu raaxaystaan ​​muuqaalka ugu xiisaha badan ee dunidan ay bixin karto.
Hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee xog -ogaalka ah ee Nepal waxay filayaan in dib loo furo dalkii Himalayan ee dalxiiska.
Maalinta Dalxiiska Adduunka ee Nepal kaliya ma noqon doonto dalwad, laakiin waxay noqon doontaa dabbaaldeg jidh ahaaneed oo ka dhici doona waddan la filayo inuu garaaco gambaleellada dib -u -furidda martida.
Iyada oo bilooyin xirnaa, Nepal waxay diyaar u tahay inay gacmo furan ku soo dhaweyso booqdayaasha.
Waxaa jiri kara sabab ay Dowladda Nepal u go'aansatay inay ugu dabaaldegto Maalinta Dalxiiska Adduunka ee soo socota Nepal jir ahaan.
Haddii uu jiro waddan adduunka ah oo fogeynta bulshada aysan dhibaato ku ahayn, waxay noqon lahayd Nepal. Dowladda Nepal ayaa dalka xirtay bilooyin badan si looga fogaado faafitaanka Coronavirus. Bilowgii masiibada Nepal waxaa loo arkay inay tusaale u tahay adduunka sida loo ilaaliyo dalxiisayaasha.
Hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee maxalliga ah ayaa isu diyaariyay dib -u -bilaabista. Kulan laba toddobaad ka hor, Agaasimihii hore ee Guddiga Dalxiiska ee Nepal, Deepak Raj Joshi wuxuu go'aansaday inuu ka codsado dowladda inay ka saarto shuruudaha karantiil ee socdaalayaasha la tallaalay si loo kiciyo dalxiiska Nepal.
Iyagoo tilmaamaya in shaqaalaha dalxiiska safka hore hadda la tallaaley waa mowqifka kooxda ee ah in waaxda dalxiiska ay ku dhawaaqdo dowladda Nepal.
Shabakada Dalxiiska Adduunka Guddoomiyaha Juergen Steinmetz wuxuu ahaa afhayeenka xaflad dhowaan ay qabteen hoggaamiyeyaasha Dalxiiska Nepal sidoo kale waxay ka wada hadlayeen tallaabada xigta ee dib u furista safarka iyo dalxiiska ee gobolka Himalayan ee Nepal, Bhutan, India, iyo Tibet.
Deepak Raj Joshi ayaa hogaaminaya Xiisaha Himalayan Group ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
Laba toddobaad ka hor kooxdu waxay ku cadaadineysay in dib loo bilaabo fiisooyinka markay yimaadaan iyo kor u qaadista tijaabada PCR ee garoonka diyaaradaha.
Halka qaybaha Nepal ay dhawaan oqalinka lagu duugay iyada oo la xaddiday, sida hoolalka shineemooyinka iyo makhaayadaha oo leh awood dhan 50%, laakiin waxaa jiray ma jiro wax cusub oo ku saabsan xayiraadaha safarka ee Nepal lix bilood gudahood.
Maalinta dalxiiska adduunka ee 2021, ayaa lagu xusi doonaa jir ahaan Nepal.
Wasiirka Dhaqanka, Dalxiiska, iyo Duulista Hawada ee Nepal ayaa ku dhawaaqay in 27 -ka Sebtembar la qaban doono dabbaaldeg weyn oo leh maaskaro iyo fogeynta bulshada.
Mawduuca Maalinta Dalxiiska Adduunka sannadkan ayaa ah ”Dalxiiska Kobcinta Loo Dhan Yahay. ”
Waxaa la rajaynayaa in dulucdu gacan ka geysan doonto kobcinta fahamka ahdaafta Horumarka Joogtada ah ee Qaramada Midoobay. Barnaamij rasmi ah ayaa laga abaabulayaa hoolka Golaha Dalxiiska ee Nepal.
Fiidiyowga Scott MacLennan, eTN Nepal
Wali ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan xaaladda dalxiiska oo dib uga furmaya Nepal, laakiin ilo xog ogaal ah ayaa eTurboNews filo in ogeysiiskani soo bixi doono dhawaan.
Imaanshaha Nepal ee booqdayaasha si buuxda loo tallaalay ayaa la filayaa in loo oggolaado muwaadiniinta dalal badan ka yimid. Karantiil u ahaanshaha booqdayaashaas mar dambe looma baahna.
Scott MacLennan, eTurboNews wariyaha Nepal ayaa yiri: Tani waa hab weyn oo loogu dabaaldego Maalinta Dalxiiska Adduunka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Dalxiiska Nepal waxaa laga heli karaa www.welcomenepal.com
Scott MacLennan waa wariye sawir qaade ah oo ka shaqeeya Nepal.
Shaqadaydu waxay ka muuqatay shabakadaha soo socda ama daabacaadaha daabacan ee la xidhiidha mareegahaas. Waxaan leeyahay waayo -aragnimo ka badan 40 sano xagga sawir qaadista, filimka, iyo soosaarka maqalka.
Istuudiyahayga ku yaal Nepal, Filimkeeda Beerteeda, waa istuudiyaha ugu qalabeysan wuxuuna soo saari karaa waxaad rabto sawirrada, fiidyowyada, iyo feylasha maqalka ah iyo dhammaan shaqaalaha Filimkeeda Farm waa haween aan tababaray.